Nadolol + Bendroflumethiazide - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Nadolol + Bendroflumethiazide
Nadolol + Bendroflumethiazide ကဘာလဲ။
Nadolol + Bendroflumethiazide ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Nadolol + Bendroflumethiazide ကို သွေးတိုးရောဂါနဲ့ ကုသရာမှာ အဓိကအသုံးပြုပါတယ်။ ဒီဆေးဝါးက သွေးဖိအားကျဆင်းစေခြင်းအားဖြင့် လေဖြတ်ခြင်း၊ နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒီဆေးဝါးမှာ Nadolol နဲ့ Bendroflumethiazide အမည်ရှိ ဆေး၂မျိုး ပါဝင်ပါတယ်။
Nadolol ဟာ beta blocker အုပ်စုဝင်ဆေးဝါးဖြစ်ပြီး နှလုံးနဲ့သွေးကြောတွေအပေါ် အက်ဒရီနယ်လင်းအပါအဝင် သဘာဝဓါတုပစ္စည်းတွေရဲ့ သက်ရောက်မှုကို ပိတ်ပင်တားဆီးပေးပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်း၊ သွေးဖိအားနဲ့ နှလုံးဝန်ပိမှုတို့ကို လျော့နည်းကျဆင်းစေပါတယ်။
Bendroflumethiazide ကတော့ ဆီးရွှင်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ခန္ဓါကိုယ်မှာပိုလျှံနေတဲ့ ဆားနဲ့ရေတွေကို စွန့်ထုတ်စေတဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။ ဒီအာနိသင်ကြောင့် ဆေးစသောက်ချိန်မှာ ဆီးများများသွားတာမျိုး ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၎င်းက သွေးကြောတွေကိုကျယ်စေပြီး သွေးလှည့်ပတ်မှုကို ပိုမိုလွယ်ကူချောမွေ့စေပါတယ်။
Nadolol + Bendroflumethiazide ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Nadolol + Bendroflumethiazide ကို အစာနဲ့တွဲပြီးဖြစ်စေ၊ ခြားပြီးဖြစ်စေ တစ်နေ့တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် သင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း လိုက်နာသောက်သုံးပါ။
ညအိပ်ယာဝင်ခါနီးမှ ဆေးသောက်မိရင် ညဘက်ဆီးသွားနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မအိပ်ခင် ၄နာရီခန့်ကြိုတင်သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ဆေးဘယ်လိုသောက်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို မေးမြန်းပါ။
သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ ကုသမှုကို တုန့်ပြန်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး သောက်သုံးရမယ့် ဆေးပမာဏကို သင့်ဆရာဝန်က ချိန်ညှိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးအာနိသင်အပြည့်အဝရရှိစေဖို့ Nadolol + Bendroflumethiazide ကို နေ့စဉ်ပုံမှန်သောက်သုံးပါ။ ဆေးသောက်ဖို့မမေ့အောင် ဆေးသောက်ချိန် တိတိကျကျသတ်မှတ်ပြီး မပျက်မကွက်သောက်သုံးပါ။ ဒီဆေးရဲ့အာနိသင်အပြည့်အဝရရှိအောင် ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာ စောင့်ဆိုင်းဖို့ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါရှိသူအများစုဟာ ဘာရောဂါလက္ခဏာမှမပြဘဲ လူကောင်းပကတိနေနိုင်ကြတဲ့အတွက် ဆေးသောက်သုံးပြီး နေထိုင်ကောင်းနေရင်တောင်မှ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း ပုံမှန်ဆက်သောက်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
Nadolol + Bendroflumethiazide ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Nadolol + Bendroflumethiazide ကို အခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Nadolol + Bendroflumethiazide ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။Nadolol + Bendroflumethiazide ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Nadolol + Bendroflumethiazideကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Nadolol + Bendroflumethiazide အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အကယ်၍ သင်ဟာ nadolol သို့မဟုတ် Bendroflumethiazide သို့မဟုတ်အခြား thiazide အုပ်စုဝင်ဆေးဝါး (ဥပမာ hydrohlorthiazide) သို့မဟုတ် အခြားအရာတစ်ခုခုနဲ့ ဓါတ်မတည့်ဘူးဆိုရင် ဒီဆေးအသုံးမပြုခင် သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို ကြိုတင်အသိပေးပါ။ ဒီဆေးဝါးမှာ ဓါတ်မတည့်တုန့်ပြန်မှုအပြင် အခြားပြဿနာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်နေနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက သင့်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
ဒီဆေးဝါးကို မသုံးသင့်တဲ့အခြေအနေတွေ ရှိတဲ့အတွက် ဆေးမသောက်ခင် သင့်ကျန်းမာရေးရာဇဝင်အကြောင်း သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်သိအောင် ပြောပြထားပါ။ အထူးသဖြင့် နှလုံးခုန်နှေးခြင်း (ဥပမာ sinus bradycardia, second-or third-degree atrioventricular block, sick sinus syndrome)၊ ဆီးမသွားနိုင်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါများ (ဥပမာ ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ၊ နာတာရှည်လေပြွှန်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အဆုတ်တွင်းရှိလေအိတ်များ ပျက်စီးခြင်း) ရှိနေရင် သင့်ဆရာဝန်ကို မဖြစ်မနေအသိပေးပါ။
ဒါ့အပြင် သင့်မှာ အသည်းရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ သိုင်းရွိုက်ဂလင်း အလုပ်လုပ်လွန်းခြင်း (သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများခြင်း)၊ နှလုံးအလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်း၊ pheochromocytoma၊ သွေးလှည့်ပတ်မှုဆိုင်ရာရောဂါ (ဥပမာ Raynaud ရောဂါ၊ ခြေလက်သွေးကြောရောဂါများ)၊ ဂေါက်ရောဂါ၊ ဆားဓါတ်မမျှတခြင်း (ဥပမာ သွေးတွင်း ကယ်လ်ဆီယမ်မြင့်တက်ခြင်း၊ ပိုတက်ဆီယမ်ကျခြင်း၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်ကျခြင်း)၊ ရေဓါတ်အများအပြားဆုံးရှုံးခြင်း၊ စိတ်ရောဂါ (ဥပမာ စိတ်ကျဝေဒနာ)၊ ကြွက်သားရောဂါ (ဥပမာ myasthenia gravis)၊ lupus ရောဂါ၊ epinephrine နဲ့ ကုသဖို့လိုအပ်တဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ဓါတ်မတည့်တုန့်ပြန်မှု စတဲ့ ရောဂါအခံတစ်ခုခု ရှိနေရင်လည်း သင့်ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
ခွဲစိတ်ကုသမှု၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာကုသမှု မခံယူခင် သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကို သင် ဒီဆေးဝါးသောက်သုံးနေကြောင်း ပြောပြထားပါ။
ဒီဆေးဝါးဟာ သင့်ကို မူးဝေငိုက်မျဉ်းစေနိုင်တဲ့အတွက် ဆေးသောက်သုံးပြီး ကိုယ့်အခြေအနေကိုယ် မသိရသေးသရွေ့ သတိကြီးကြီးထားပြီး နိုးနိုးကြားကြားလုပ်ဆောင်ရမယ့် တာဝန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ (ဥပမာ ကားမောင်းခြင်း၊ စက်ယန္တရားအသုံးပြုခြင်း) မပြုလုပ်မိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အရက်နဲ့ဆေးခြောက်တို့မှာလည်း မူးဝေငိုက်မျဉ်းစေတဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိတာကြောင့် ဒီဆေးဝါး သောက်သုံးနေစဉ်အတောအတွင်း အရက်သောက်သုံးမှုကို ကန့်သတ်ပါ။ ဆေးခြောက်သုံးတဲ့အကျင့်ရှိရင် သင့်ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
ရုတ်တရက်မူးဝေခြင်းမဖြစ်ရအောင် (သင့်ဆရာဝန်က တားမြစ်ထားခြင်းမရှိရင်) ဒီဆေးသောက်သုံးနေတဲ့ကာလတလျှောက် ရေများများသောက်ပါ။ ချွေးထွက်လွန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း စတာတွေက သင့်ကို မူးဝေစေတဲ့အတွက် ဒီလက္ခဏာတွေ အချိန်ကြာကြာဖြစ်လာခဲ့ရင် သင့်ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
ဒီဆေးဝါးဟာ သွေးတွင်းပိုးတက်ဆီယမ်ပမာဏကို ကျဆင်းစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစားအသောက်တွေထဲ ပိုတက်ဆီယမ်ဓါတ် ဖြည့်တင်းဖို့လိုမလို သင့်ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ကလည်း ပိုတက်ဆီယမ်အားဖြည့်ဆေးတွေ သောက်သုံးဖို့ ညွှန်းပေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်မှာ သွေးချိုဆီးချိုရောဂါအခံရှိရင် ဒီဆေးဝါးဟာ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကျဆင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း/ကြမ်းခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားခြင်း၊ကတုန်ကယင်ဖြစ်ခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာတွေကို ဖုံးကွယ်နိုင်ပေမယ့် ဆာလောင်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်းနဲ့ ချွေးစေးပြန်ခြင်းတို့အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဆေးကြောင့် သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ထိန်းညှိရာမှာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ပမာဏကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပြီး ရလဒ်အဖြေတွေကို သင့်ဆရာဝန်ထံ အသိပေးသင့်ပါတယ်။ ဆေးသောက်သုံးပြီး ရေငတ်ခြင်း၊ ဆီးသွားများခြင်းစတဲ့ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်များတဲ့လက္ခဏာတွေ ပေါ်လာခဲ့ရင် သင့်ဆရာဝန်ကို အမြန်ဆုံးအသိပေးပါ။ သင်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ဆေးဝါး၊ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်နဲ့ အာဟာရတွေကို ပြောင်းလဲထိန်းညှိဖို့ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီဆေးဝါးဟာ နေရောင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ကို လျော့ကျစေတဲ့အတွက် ဆေးအသုံးပြုနေတဲ့ အချိန်ကာလအတွင်း နေရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့မှုကို တတ်နိုင်သမျှ လျော့ချပါ။ Tanning booth နဲ့ sunlamp များ အသုံးပြုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ အပြင်ထွက်တိုင်း နေရောင်ကာလိမ်းဆေးလိမ်းပါ။ အဝတ်အစားလုံလုံခြုံခြုံဝတ်ပါ။ နေလောင်ခြင်း၊ အရေပြားနီရဲခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုထခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရင် သင့်ဆရာဝန်ကို အမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားပါ။
အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေဟာ မူးဝေခြင်းအပါအဝင် ဒီဆေးဝါးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဒဏ်တွေကို ခံစားရနိုင်ချေ ပိုများပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ nadolol+ Bendroflumethiazide ကို အမှန်တကယ်လိုအပ်မှသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ဆေးကြောင့်ရလာနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ဖို့ သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ဒီဆေးဝါးဟာ မိခင်နို့ရည်ကနေတင့် နို့စို့ကလေးငယ်ဆီရောက်ရှိပြီး မလိုလားအပ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတွက် မိမိရင်သွေးကို နို့မတိုက်ခင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Nadolol + Bendroflumethiazide ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Nadolol + Bendroflumethiazide ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Nadolol + Bendroflumethiazide ကြောင့် မူးဝေခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း စတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ အနည်းငယ်သောလူတွေမှာ ကာမစွမ်းရည်ကျဆင်းမှုရှိတယ်လို့လည်း သတင်းပေးပို့ချက်တွေအရ သိရှိရပါတယ်။ အကယ်၍ အချိန်ကြာတဲ့အထိ ဒီလက္ခဏာတွေ မသက်သာရင် ဒါမှမဟုတ် ပိုဆိုးလာရင် သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးပါ။ ရုတ်တရက်မူးဝေခြင်းမဖြစ်စေဖို့ လှဲရာ၊ ထိုင်ရာကထတဲ့အခါ ခန္ဓါကိုယ်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းအနေအထားပြောင်းပါ။
ဒီဆေးမှာပါတဲ့ Bendroflumethiazide ကြောင့် ခန္ဓါကိုယ်က ရေဓါတ်နဲ့ဆားဓါတ်အများအပြား ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ ဆေးသောက်သုံးပြီး အာခြောက်ခြင်း၊ ရေအလွန်ငတ်ခြင်း၊ ကြွက်တက်ခြင်း၊ ကြွက်သားအားနည်းခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ ဆိုးဆိုးရွားရွားမူးဝေခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်း၊ တက်ခြင်းစတဲ့ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်မှုလက္ခဏာတွေ ပေါ်လာခဲ့ရင် သင့်ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။
ဆေးသောက်သုံးပြီး နှလုံးခုန်နှုန်းအလွန်နှေးလာခြင်း၊ နှလုံးအလုပ်မလုပ်နိုင်သည့် လက္ခဏာများ ပိုဆိုးလာခြင်း (ဥပမာ မောခြင်း၊ ခြေချင်းဝတ်/ခြေထောက်များ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ခါတိုင်းနဲ့မတူအောင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ရုတ်တရက် ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်း)၊ စိတ်ခံစားချက်ပြောင်းလဲခြင်း (ဥပမာ စိတ်ကျခြင်း၊ စိတ်အတက်အကျမြန်ခြင်း)၊ ခြေချောင်းခြေဆစ်များ နာကျင်ခြင်း၊ ခြေချောင်း၊လက်ချောင်း၊ ခြေသည်းလက်သည်းများ ပြာလာခြင်း၊ အလွယ်တကူ အညိုအမဲစွဲခြင်း၊ သွေးယိုခြင်း၊ ပိုးဝင်ခြင်း (အဖျားတက်ခြင်း၊ အချိန်ကြာကြာ လည်ချောင်းနာခြင်း)၊ မျက်စိဝါခြင်း၊ အသားဝါခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ အစာအိမ်/ဝမ်းဗိုက်ဆိုးဆိုးရွားရွားအောင့်ခြင်း၊ ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ထိခိုက်သည့် လက္ခဏာများ (ဥပမာ ဆီးပမာဏပြောင်းလဲခြင်း)စတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်လာခဲ့ရင် ဆေးရုံဆေးခန်းရှိရာသို့ အမြန်ဆုံးသွားရောက်ပြသပါ။
အမြင်အာရုံကျဆင်းခြင်း၊ မျက်စိနာခြင်း စတဲ့လက္ခဏာတွေ ပေါ်လာခဲ့ရင်လည်း ဆေးရုံဆေးခန်း အမြန်ဆုံးသွားပြပါ။
Nadolol ကြောင့်ပြင်းထန်တဲ့ဓါတ်မတည့်တုန့်ပြန်မှု ဖြစ်ခဲပေမယ့် ဆေးသောက်သုံးပြီး အဖုအပိမ့်အနီကွက်များထွက်ခြင်း၊ မျက်နှာ၊ လျှာ၊ လည်ချောင်း စသည်တို့ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ ဆိုးဆိုးရွားရွား မူးဝေခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း စတဲ့လက္ခဏာတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်လာခဲ့ရင် အရေးပေါ်ဆေးကုမှု အမြန်ဆုံးခံယူပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Nadolol + Bendroflumethiazide နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Nadolol + Bendroflumethiazide ဟာ cisapride နဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုနိုင်တဲ့အတွက် ၎င်းဆေးဝါးနဲ့တွဲပြီး လုံးဝမသောက်သုံးသင့်ပါဘူး။
အကယ်၍သင်ဟာ cisapride သောက်သုံးနေတယ်ဆိုရင် Nadolol + Bendroflumethiazide စမသောက်ခင် သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးသင့်ပါတယ်။
တကယ်တော့ သင်သောက်သုံးနေသမျှ ဆေးဝါးအားလုံး (ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ဆေး၊ မညွှန်ကြားတဲ့ဆေးနဲ့ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်အားလုံး) အကြောင်း သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်သိအောင် ပြောပြပါ။ အထူးသဖြင့် warfarin လို သွေးကြဲဆေးတွေ၊ dofetilide၊ fingolimod သို့မဟုတ် lithium အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်ကို မဖြစ်မနေအသိပေးပါ။
Cholestyramine နဲ့ colestipol တို့က Bendroflumethiazide စုပ်ယူမှုကို လျော့နည်းစေတဲ့အတွက် အဆိုပါဆေးဝါးတွေကို Nadolol + Bendroflumethiazide နဲ့ အနည်းဆုံး ၄နာရီခြားပြီး သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အချိုဆေးဝါးတွေမှာ နှလုံးခုန်နှုန်းနဲ့ သွေးဖိအားမြင့်တက်စေတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်တဲ့အတွက် သင်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ဆေးဝါးတွေ (အထူးသဖြင့် အအေးမိချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး၊ အာဟာရအားဖြည့်ဆေးနဲ့ ibuprofen၊ naproxen တို့လို စတီးရွိုက်မပါဝင်တဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ) အကြောင်း သင့်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို ပြောပြပြီး ဘယ်လိုစနစ်တကျ အသုံးပြုရမယ်ဆိုတာ မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။
ဒီဆေးဝါးဟာ အချို့သော ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုအဖြေတွေ (ဥပမာ ပါရာသိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း၊ ပရိုတင်းနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အိုင်အိုဒိုက်၊ tyramine၊ phentolamine စစ်ဆေးမှုများ) ကို ကမောက်ကမဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် သင်ဒီဆေးသောက်သုံးနေကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ဓါတ်ခွဲပညာရှင်နဲ့ ဆရာဝန်သိအောင် ပြောပြထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Nadolol+ Bendroflumethiazide ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Nadolol + Bendroflumethiazide နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Nadolol+ Bendroflumethiazide က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Nadolol + Bendroflumethiazide နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Nadolol+ Bendroflumethiazide ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Nadolol + Bendroflumethiazide ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကနဦးသောက်သုံးရမည့်ပမာဏ – Bendroflumethiazide ၅ မီလီဂရမ်၊ Nadolol ၄၀ မီလီဂရမ်၊ တစ်နေ့ ၁ကြိမ်သောက်ရန်
ရေရှည်သောက်သုံးရမည့်ပမာဏ – Bendroflumethiazide၅ မီလီဂရမ်၊ Nadolol ၄၀ မီလီဂရမ်မှ ၈၀ မီလီဂရမ်၊ တစ်နေ့တစ်ကြိမ်သောက်ရန်
အသုံးပြုရန် – ဆေးနှစ်မျိုး ပုံသေပေါင်းစပ်ထားသည့် ပမာဏက လူနာအတွက် သင့်တော်တဲ့ပမာဏဖြစ်ရင် သွေးတိုးရောဂါကုသရာမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကျောက်ကပ်မှ creatinine ဖယ်ရှားမှုနှုန်း (CrCl) ၅၀ mL/min/၁.၇၃ m2 အထက် – ၂၄နာရီခြားတစ်ကြိမ် သောက်ရန်
CrCl ၃၁ မှ ၅၀ mL/min/၁.၇၃ m2 အထိ – ၂၄နာရီမှ ၃၆နာရီခြားတစ်ကြိမ် သောက်ရန်
CrCl ၁၀ မှ ၃၀ mL/min/၁.၇၃ m2 အထိ – ၂၄နာရီမှ ၄၈နာရီခြားတစ်ကြိမ် သောက်ရန်
CrCl ၁၀ mL/min/၁.၇၃ m2 အောက် – တစ်ကြိမ်နှင့်တစ်ကြိမ် နာရီ ၄၀မှ နာရီ ၆၀ခြားပြီး သောက်ရန်
(အကယ်၍ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှု သိသိသာသာ ပိုဆိုးလာလျှင် – သွေးတွင်းရှိ ပရိုတင်းမပါသည့် နိုက်ထရိုဂျင်ပမာဏ သို့မဟုတ် ယူရီးယားနှင့် နိုက်ထရိုဂျင်ပမာဏ မြင့်တက်လာလျှင် – ဆီးရွှင်ဆေးသောက်သုံးမှုကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်းဖို့ သို့မဟုတ် ရပ်တန့်ဖို့ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
သွေးတွင်း electrolyte ပမာဏကို အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် ပုံမှန်စစ်ဆေးပေးပါ
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ ရုတ်တရက်ဆေးရပ်လိုက်ခြင်း၊ ဆေးပုံမှန်မသောက်ခြင်း မပြုလုပ်သင့်ပါ။
ကလေးတွေအတွက် Nadolol + Bendroflumethiazide ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Nadolol + Bendroflumethiazide ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Nadolol + Bendroflumethiazide ကို ဆေးပြာ;ပုံစံဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Nadolol + Bendroflumethiazide ကို သောက်ဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်ဆေးသောက်ရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း မေ 28, 2019
Nadolol Dosage. https://www.drugs.com/dosage/nadolol.html. Accessed March 23, 2018.
Nadolol. https://www.webmd.com/drugs/2/drug-11755/nadolol-oral/details. Accessed March 23, 2018.
ကျန်းမာရေးစင်တာ (EN), ကျန်းမာရေးအားလုံး
သွေးပေါင်ချိန်စက်ကဖော်ပြနေတဲ့ နံပါတ်တွေ ပြောပြတဲ့ သင့်ကျန်းမာရေးအကြောင်း ။ ။